Idatabase le-imeyili laseSwitzerland | Ikheli le-imeyili | Idathabhegi Yokuposa Yamuva
Isizinda Se-imeyili SaseSwitzerland
Database lakamuva Lokuposa » Isizinda Se-imeyili SaseSwitzerland
Imininingwane ye-imeyili yeSwitzerland ikunikeza ibhizinisi leSwitzerland nemininingwane yokuxhumana yabathengi. I-Database lakamuva ™ linemininingwane engaphezulu kwezigidi ezingama-300 ye-imeyili evela emhlabeni wonke. Sine-database yebhizinisi elihle nekhwalithi evela eSwitzerland. Sikunikeza i-2018 Database le-imeyili lakamuva futhi elifanele leSwitzerland ukukhulisa ukuthengisa kwenkampani yakho. I-Database lakamuva ™ ngumhlinzeki wohlu lwamakheli we-imeyili ohamba phambili emhlabeni.
Imininingo egciniwe ye-imeyili yaseSwitzerland izokusiza ukuthi ufinyelele ebhizinisini laseSwitzerland nabantu abathengi. Ungabafinyelela kalula ngale database ye-imeyili yaseSwitzerland. Uzothola i-90% ulwazi olunembile kulolu hlu lwe-imeyili.
Ikheli le-imeyili Yebhizinisi laseSwitzerland
Switzerland B2B Ikheli le-imeyili
Uhlu lwamakheli e-imeyili lebhizinisi laseSwitzerland lukuhlinzeka ngemininingwane yokuxhumana yebhizinisi esebenzayo kuphela evela ebhizinisini laseSwitzerland. Ungasebenzisa le database ye-imeyili yebhizinisi laseSwitzerland ngemikhankaso yakho yokumaketha i-imeyili yenkampani yakho. Futhi uma ufuna ukuthola noma iyiphi i-database yangokwezifiso evela eSwitzerland sicela usazise. Ngaphezu kwakho konke imininingwane ye-imeyili yebhizinisi laseSwitzerland.
Inani lamarekhodi: 900,000
Uhla lwe-imeyili yabathengi baseSwitzerland
Switzerland B2C Ikheli le-imeyili
Njengoba sisebenzela amazwe athuthukile, sibe nedumela ebhizinisini online. Uma ufuna ukuhlala uqinile phakathi kwamanye amazwe avelele nanamandla kufanele wenze ipulatifomu eqinile ngokukhetha inkampani ehamba phambili online. Sikholelwa ngokweqiniso ukuthi, inkampani yethu izokwazi ukwanelisa izidingo zakho futhi yakhe ukuqashelwa kwakho njengomthengisi ophumelelayo online.
Ungahlulela insizakalo yokunikela yenkampani yethu ngokusebenzisa uhlu lwethu lokuposa lokuposa. Kuzoba sobala uma uvakashela iwebhusayithi yethu futhi ubheke imibono / impendulo mayelana nensizakalo yethu. Singanikeza isiqiniseko sokuthi, asisoze samangalelwa nguwe.
Uhlu lwe-imeyili lwabathengi baseSwitzerland olunabantu baseSwitzerland kuphela idatha esebenzayo. Ungasebenzisa lolu hlu ukukhuthazwa kwenkampani yakho. Ngakho-ke uma ufuna ukudala imikhankaso yeposi eya eSwitzerland khona-ke le database izokusiza kulokhu. Ngaphezu kwakho konke imininingwane ye-imeyili yabasebenzisi baseSwitzerland.
Thenga iSwitzerland B2C Uhlu lwe-imeyili
Inani lamarekhodi: 2 Million
* Igama Lokuqala * Igama Lokuxhumana * Ubudala * ikheli
* Ikheli le-imeyili* IP ikheli * Inombolo yocingo
I-2020 Switzerland Ibhizinisi Egciniwe Lamarekhodi Abathengi
Ukuze uthole lokhu kufanele udinge inkampani yakamuva futhi ithuthukise ukuze usebenze nayo. Ungahambisana neDatabase Lokulawula Kamuva, ingenye yezinkampani zomhlaba ezivelele kakhulu emhlabeni. Inkampani yethu isungule i-imeyili yemininingwane ye-2018. Siqoqe imininingo egciniwe ye-imeyili yeBhizinisi nabathengi kusuka kuwo wonke umhlaba kusuka lapho ungathola khona yakamuva futhi ilethelwe uhlu lwamakheli manje.
ISwitzerland I-Database ye-imeyili Umbuzo nempendulo
Ikheli le-imeyili laseLatvia
Izinombolo zocingo zasePoland
Uhlu lwe-imeyili lweDominos
Izinombolo zomakhalekhukhwini zaseLebanon
Ikheli le-imeyili laseJalimane de
Izinombolo zocingo zaseSwitzerland
Uhlu lwe-imeyili lwaseNetherlands
lonke uhlu lwezinombolo zocingo lwaseNdiya
thenga uhlu lwama-imeyili iNingizimu Afrika
Uhlu lwezinombolo zocingo e-Dubai